प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल – Gaule Media ::
Home/समाचार/प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल
Gaule media २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १३:५६
फागुन २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ। बुधबार बिहान साढे १० बजेदेखि सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन्। भाञ्जी समीक्षा संग्रौलाको शरीरबाट निकालिएको मिर्गौला ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपणपछि काम गर्न थालेको डा. अरुण सायमीले थाहाखबरलाई बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको शरीरमा मिर्गौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण भएको छ’, ओलीका निजी चिकित्सक डा. अरुण सायमीले भने, ‘नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले पिशाव पनि फेर्नुभएको छ।’ उनका अनुसार नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालिसकेकाले अहिले प्रधानमन्त्रीको काटिएको शरीरको घाउमा टाँका लगाउने काम भइरहेको छ। ‘प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्रीले पिशाव पनि गर्नुभएको छ। अब टाँका लगाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेपछि पहिलो स्टेपको ‘डेन्जर जोन’ पार भयो। अबको केहीबेरमा प्रत्यारोपणको सबै काम सकिन्छ।
प्रत्यारोपणपछिको करिब २ घण्टामा प्रधानमन्त्रीको होस फर्किने ती चिकित्सकले बताए। ‘टाँका लगाइसकेपछि डेढ दुईघण्टामा होस आउँछ’, उनले भने, ‘यसबारेमा अस्पतालले साढे चार बजे पत्रकार सम्मेल गरेर विस्तृत जानकारी गराउनेछ।’ अब चिकित्सकहरुले नयाँ मिर्गौलाबारे तीन घण्टा पछाडिको अवस्था हेर्नेछन्। त्यसपछि तीन दिन र एक सातासम्म मिर्गौलाले अहिले जस्तै काम गरे ढुक्क हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
४ माघ २०७५, शुक्रबार ००:३५
पोखरा महोत्सवबाट जु–लोजिकल पार्क हेर्ने अवसर
१७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:२२
निशुल्क व्यवसायिक मौरीपालन तालिम हुने